Isitudiyo sasolwandle esihle! Indawo enhle kakhulu! umbono wolwandle! - I-Airbnb
Isitudiyo sasolwandle esihle! Indawo enhle kakhulu! umbono wolwandle!
Oostende, Vlaanderen, i-Belgium
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Phyllis
Ngokungazelelwe usesimweni sokuhamba ngothando ogwini lolwandle? Ungabe usabheka okunye futhi ujabulele lesi situdiyo esithokomele lapho ungajabulela khona ingilazi ngenkathi ubuka ukushona kwelanga! Awukakhathali? khetha phakathi kwezindawo eziningi ezinhle zokudla nokuphuza. Isimo sezulu esibi? Bamba imuvi ebhayisikobho (eKinepolis), hamba uyothenga, hamba uyobhukuda (idamu lokubhukuda elisha!) noma ugxume ku-tram yasogwini (yima maqondana nomnyango)! Uncamela ukuhamba ngebhayisikili? Isitolo esiqashisayo esakhiweni esiseZeedijk noma thola idolobha eliphithizelayo ngesikuta!
Lesi situdiyo esinokubukwa okuhle kolwandle sinikeza indawo yokuhlala emnandi enombhede usofa, i-TV, itafula lokudlela elinezihlalo, igumbi lokugezela, sep. indlu yangasese, ikhishi kanye nethala elihle! Ukushona kwelanga kwenza ukuhlala kwakho kube kuhle kakhulu! Uyathanda ukuthenga nokuphuma? Bese uthola leli dolobha elinempilo! Ungadla ibhulakufesi esitezi esingezansi esitolo 'Aldis' esitezi esiphansi, lapho futhi unethala elimnandi lokuphumula.
4.73 · 89 okushiwo abanye
Idolobhana elinakho konke okunikezwayo: isikhungo sokuthenga esihle esinezindawo zokudlela eziningi namabha! I-Zeedijk enhle enamabhishi amaningi ehlobo, i-Cinema, imicimbi yaminyaka yonke edolobheni nasepaki elihle ledolobha! Imizila emihle yamabhayisikili (isitolo esiqashisayo esakhiweni esiseZeedijk), indawo yokubhukuda kamasipala ebangeni elingu-100m, ... Idolobha eliphithizelayo!
I-imeyili noma i-SMS noma iWhatsapp
Hlola ezinye izinketho ezise- Oostende namaphethelo